Podcasts tsy misintona amin'ny iPhone? Ity ny The Real Fix! - Iphone
fanaraha-maso volume 2 ipad air 2
bokotra wifi iphone tsy mandeha
ny fomba hanarenana ireo mailaka voafafa mandrakizay amin'ny iphone
ny fomba fanamboarana wifi greyed amin'ny iphone 4s
Podcasts tsy misintona amin'ny iPhone? Ity ny The Real Fix!
Te hihaino fizarana farany amin'ny podcast tianao indrindra ianao, saingy tsy hisintona amin'ny iPhone izany. Na inona na inona ataonao dia tsy misintona ny fizarana vaovao. Amin'ity lahatsoratra ity dia hanazava aho inona no hatao rehefa tsy misintona amin'ny iPhone ny podcast !
Ahoana no handrindrana ireo podcasts amin'ny iPhone-nao
Alohan'ny hisitrika lalindalina kokoa, makà segondra mba hahazoana antoka fa Sync Podcasts dia mirehitra. Raha misintona ny podcast anao amin'ny iTunes ianao dia tsy maintsy ampifanarahinao amin'ny iPhone alohan'ny hihainoana azy ireo.
Mba hahazoana antoka fa mampifandray ny iPhone ny podcast-nao, mankanesa any Fikirana -> Podcasts ary avereno eo akaikiny ny switch Sync Podcasts . Ho fantatrao fa mandeha ny Sync Podcasts rehefa maintso ny switch. Raha tsy mandeha ny Sync Podcasts, kitiho ny switch mba hampandehanana azy.
Fa maninona no tsy misintona amin'ny iPhone ny Podcast?
Matetika, ny iPhone dia tsy hisintona podcast satria tsy mifandray amin'ny Wi-Fi. Ny maro amin'ireo dingana famahana olana amin'ity lahatsoratra ity dia hanampy anao hamantatra ireo olana mifandraika amin'ny Wi-Fi, fa taty aoriana dia hiresaka antony hafa mety tsy idiran'ny Podcasts amin'ny iPhone-nao ihany koa izahay.
Azoko atao ve ny mampiasa angon-drakitra finday handefasana ireo Podcast an'ny iPhone?
Ie! Raha te hampidina podcast ianao amin'ny alàlan'ny angon-drakitra finday, vonoy eo akaikiny ny switch Misintona amin'ny Wi-Fi fotsiny amin'ny Fikirana -> Podcasts .
Teny fampitandremana: Raha maty ianao Misintona amin'ny Wi-Fi fotsiny ary raha velomina ny fampidinana podcast mandeha ho azy, misy vintana mety hampiasa data be dia be amin'ny fampidinana fizarana vaovao amin'ny podcast-nao rehetra ny iPhone.
Izany no antony anolorako hevitra ny hamelana ny Download Download On Wi-Fi ihany - afaka mihazona fahagagana lehibe ianao amin'ny manaraka rehefa mahazo faktiora avy amin'ny mpitatitra tsy misy tariby ianao.
Ny iPhone-nao tsy ho afaka misintona podcast amin'ny iPhone-nao raha toa ka maty ny Mode Airplane. Sokafy ny Fikirana fampiharana ary kitiho ny switch eo akaikin'ny Mode Airplane . Ho fantatrao fa tsy mandeha ny Airplane Mode rehefa fotsy ny switch ary apetraka ankavia.
Raha efa maty ny Mode Airplane dia manandrama manodina azy ary miverena indray amin'ny alàlan'ny fanoratana indroa ny switch.
Matetika, ny glitches rindrambaiko madinidinika dia mety manelingelina ny fifandraisan'ny iPhone amin'ny Wi-Fi. Raha tsy mifandray amin'ny Wi-Fi izany dia mety tsy afaka misintona podcast ny iPhone-nao.
Fomba iray haingana hanandramana sy hamahana ny olan'ny Wi-Fi rindrambaiko madinidinika dia ny famonoana ny Wi-Fi ary miverina. Hanome fanombohana vaovao ny iPhone izany, satria afaka manandrana mampifandray amin'ny tamba-jotra Wi-Fi anao indray.
Mandeha Fikirana -> Wi-Fi ary paompy ny switch eo akaikin'ny Wi-Fi hamonoana azy. Ho fantatrao fa maty ny Wi-Fi rehefa fotsy ny switch. Andraso segondra vitsy, avy eo paompy indray ny switch mba hiverenanao Wi-Fi indray.
Adinoy ny tambajotra Wi-Fi ary avereno hifandray
Raha tsy mandeha ny fanovana Wi-Fi ary miverina hiverina dia andramo adino tanteraka ny tambajotra Wi-Fi anao. Amin'izany fomba izany, rehefa mifandray indray amin'ny tambajotra ianao aorian'izay, dia ho toy ny hoe sambany mifandray amin'ny tamba-jotra ianao.
Raha misy zavatra niova tamin'ny dingan'ny fomba fampifandraisan'ny iPhone amin'ny tamba-jotra Wi-Fi anao, ny fanadinoanao ny tamba-jotra sy ny fifandraisana indray dia matetika no mitaky ny fanovana.
Raha hanadino ny tamba-jotra Wi-Fi dia sokafy ny Fikirana ary kitiho ny Wi-Fi. Avy eo, kitiho ny bokotra fampahalalana (ilay 'i' manga ao anaty faribolana). Farany, tap Adinoy ity tambajotra ity , avy eo Adinoy rehefa mipoitra eo amin'ny efijery ny fanairana fanamafisana.
Vantany vao hadino ny tambajotra dia hiseho eo ambany io Misafidiana tambajotra iray . Tsindrio ny tamba-jotra Wi-Fi anao, avy eo ampidiro ny tenimiafin'ny tamba-jotra ahafahanao mifandray indray.
Ampodio ny fizarana Episodes
Mandeha Fikirana -> Podcasts -> Download Episodes ary safidio ihany ny Vaovao na ny lalao rehetra tsy lalaovina - na ny safidy dia hampidina ny fizarana amin'ny podcast anao rehefa misy izy ireo.
Na izany aza, raha voafidy ny Off, ny iPhone dia tsy hampidina podcasts ho azy rehefa misy.
Zahao ny fameperana ny atiny sy ny fiainanao manokana
Ny fameperana dia fifehezana ho an'ny ray aman-drenin'ny iPhone anao, ka raha maty tsy nahy ny Podcasts dia tsy ho azonao atao ny misintona azy ireo.
Sokafy ny fikirana ary kitiho Fotoana amin'ny fàfana -> Fepetra momba ny atiny sy tsiambaratelo -> Fampiharana alefa . Hamarino tsara fa efa mandeha ny switch eo akaikin'ny Podcasts.
Raha manandrana misintona sy podcast mazava ianao dia miverena Fikirana -> Fotoan'ny efijery -> Fepetra momba ny atiny sy tsiambaratelo ary tap Fameperana atiny .
Eo ambanin'ny atiny fivarotana rehetra, alao antoka mazava voafantina ho an'ny Music, Podcasts & News.
Amin'ny iPhones mihazakazaka iOS 11 na antitra
Mandeha Fikirana -> Ankapobeny -> Famerana ary ampidiro ny kaody fehin'ny fameperana. Avy eo, mihodina mankany Podcasts ary alao antoka fa nirehitra ny switch eo akaikiny.
Olana anaty lozisialy lalina
Raha nahavita hatreto ianao dia efa niasa tamin'ny dingana fanitsiana vahaolana bebe kokoa rehefa tsy misintona amin'ny iPhone ny podcast. Ankehitriny, tonga ny fotoana hamahana ireo olana mety hitranga lalindalina kokoa.
Fafao ary avereno apetraka ny App Podcasts
Na dia voamarina mafy aza ny fampiharana iOS, dia mbola afaka misedra olana indraindray izy ireo. Rehefa sendra olana amin'ny fampiharana ianao dia matetika no mamafa ny olana ny famafana sy ny fametrahana indray ilay app.
Azo inoana fa tsy misintona amin'ny iPhone ny podcasts satria nanjary simbaina ny fisie lozisialy ao anatin'ny fampiharana Podcasts. Hamafana ny fampiharana Podcasts izahay, avy eo hamerina azy toy ny vaovao!
Aza manahy - tsy ho very ny podcast rehetrao amin'ny famafana ny fampiharana amin'ny iPhone-nao.
Voalohany, fafao ny fampiharana amin'ny alàlan'ny fanindriana moramora sy mitazona ny kisary fampiharana mandra-pihetsiketsika ny fampiharana anao rehetra. Manaraka, tap ny kely X izay hita eo amin'ny zoro havia ambony amin'ny kisary fampiharana, avy eo Mamafa .
Rehefa voafafa ilay fampiharana dia sokafy ny App Store ary tadiavo ny fampiharana Podcasts. Raha vantany vao hitanao izany dia kitiho ny kisary rahona kely eo ankavanany hametraka azy io indray. Rehefa manokatra ny fampiharana ianao dia ho hitanao eo daholo ireo podcast-nao rehetra!
Raha fifandraisana Wi-Fi ratsy no antony tsy mampidina ny podcast amin'ny iPhoneo, andramo ny famerenana ny fikirakira tambajotra iPhone. Hiverina amin'ny laoniny ny Wi-Fi, Bluetooth, Cellular, ary ny toeran'ny VPN rehetra ho an'ny tsy fetezan'ny orinasa.
Rehefa mifandray amin'ny tamba-jotra Wi-Fi ianao aorian'ny famerenanao ny fikirakira tamba-jotra, dia ho toy ny mampifandray an'io tamba-jotra io ianao amin'ny fotoana voalohany. Ity fanombohana vaovao tanteraka ity dia matetika no manamboatra ny olan'ny lozisialy izay nanakana ny iPhone tsy hifandray tamin'ny Wi-Fi voalohany.
Fanamarihana: Alohan'ny hamerenanao ny toeran'ny tamba-jotra dia alao antoka fa hanoratra daholo ny teny miafinao Wi-Fi ianao, satria tsy maintsy miditra indray ianao rehefa vita ny famerenana.
Raha hamerina ny fikirakira tamba-jotra amin'ny iPhone dia mankanesa any Fikirana -> Ankapobeny -> Famerenana -> Avereno ny fametrahana ny tambajotra . Ampidiro ny passcode-n'ny iPhone anao, avy eo tap Avereno ny fametrahana ny tambajotra rehefa miseho eo amin'ny efijery ilay fampandrenesana fanamafisana.
Raha mbola manakana anao tsy hisintona podcast amin'ny iPhone-nao ny olan'ny Wi-Fi, zahao ny lahatsoratray izay tokony hatao rehefa rahoviana Tsy mandeha amin'ny iPhone-nao ny Wi-Fi .
Manaova A DFU Restore
Ny dingana famahana olana farany an'ny rindrambaiko dia famerenana amin'ny laoniny DFU, izay hamafana ny rehetra ary hampakatra ny kaody rehetra amin'ny iPhone. Ity dingana ity dia somary mahery vaika rehefa tsy misintona amin'ny iPhone ny podcast, noho izany dia tsy hanome toro-hevitra fotsiny aho ny hanao izany RAHA miaina olana rindrambaiko maro hafa koa ianao.
Raha mahatsapa ianao fa toa ny famerenana amin'ny laoniny DFU no safidy mety aminao, zahao ny lahatsoratray hianaranao ny fomba fametrahana ny iPhone ao anaty maody DFU .
Na dia izany aza tena tsy azo inoana fa mety ho tapaka ny antena Wi-Fi ao anatin'ny iPhone misy anao, izay manakana azy tsy hifandray amin'ny tamba-jotra Wi-Fi anao. Ity antena ity ihany dia mampifandray ny iPhone amin'ny fitaovana Bluetooth anao, ka raha sendra olana maro no nifandraisanao na Bluetooth sy Wi-Fi tato ho ato, mety ho tapaka ny antena.
Raha arovan'ny AppleCare + ny iPhone-nao, dia manoro hevitra aho fandaharam-potoana ary ento any amin'ny Apple Store anao eo an-toerana izany mba hahafahan'ny mpikambana ao amin'ny Genius Bar hijerena azy io ary hamaritana raha vaky na tsia ilay antena.
Manoro hevitra mafy ihany koa aho hanin-kotrana , orinasa mpanamboatra on-demand izay handefa teknisianina voamarina mivantana aminao. Hamboarin'izy ireo eo akaiky eo ny iPhone-nao, ary hositranina mandritra ny androm-piainana izany fanamboarana izany!
Podcast: Misintona indray!
Namboarinao tsara tamin'ny iPhone ny olana ary afaka manomboka mihaino ireo podcast-nao indray ianao. Amin'ny manaraka dia tsy misintona amin'ny iPhone ny podcast, ho fantatrao tsara ny fomba hamahana ilay olana. Raha manana fanontaniana hafa ianao, aza misalasala mamela azy ireo eto ambany ao amin'ny faritra misy ny hevitra!
sary tsy mandefa amin'ny iphone